Himalaya Dainik » बलिउड नायिका सोनम कपुरको फरक ‘लुक्स’ हेराैँ १३ तस्बिर
बलिउड नायिका सोनम कपुरको फरक ‘लुक्स’ हेराैँ १३ तस्बिर
भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर अहिले आफ्नो ह’ट अवतारका कारण चर्चाको शिखरमा छिन । सन २००७ मा साँवरिया फिल्मबाट डेब्यु गरेकी ३३ बर्षीया कपुर अहिले बलिउड फेसन आईकनको रुपमा स्थापित भएकी छिन ।
उनले लगाउने हरेक लुगा फेसनको दुनियाँमा ट्रेण्डिङको स्तरमा पुग्छ । सन २०१८ मा आनन्द अहुजासंग विहे गरेकी अभिनेत्री सोनम कपुरले फोटो सुट सामाजिक संजालमा निकै भाइरल भइरहन्छन् ।
केहि पहिला बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर र उनका श्रीमान आनन्द आहुजा क्वारेन्टाइनमा बसेको खबरले पनि निकै चर्चा पायो ।
श्रीमान आनन्द आहुजासँग लन्डन बस्दै आएकी सोनम भारत फर्किएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामको स्टोरीमार्फत आफु क्वारेन्टाइनमा बस्न लागेको बताएकी थिइन् ।
अभिनेत्री कपुर र उनका श्रीमान आहुजालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिए पनि परिवारका सदस्यसँग घुलमिल हुनु पर्ने हुँदा क्वारेन्टाइनमा बस्न लागेको बताएका थिए ।
उज्यालो भयो, उठौ साथी हो : रवि लामिछाने
पत्रकार रबि लामिछाने आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नु हुन्छ : कुरा श्रीमतीको ह,त्या गरी श,व जलाउने एउटा क्रु,र ह,त्यारा रन्जन कोइरालाको उन्मुक्तिको मात्र होइन, कुरा सडक पेटीमा हिडेकाको छातीमा जाँ ड खाएर गाडी चडाउने पृथ्वी मल्लको रिहाईको मात्र पनि होईन।यो त समग्र प्रणाली पुरै जिर्ण भैसकेको जनाउ संकेत हो, घण्टी हो।
अब कुरा रिटेलमा होइन होलसेलमा गरौं,पिस मा होइन सिंगै थानमा गरौं। त्यत्रो त्या ग, ब,लिदानबाट प्राप्त उपलब्धिले दिएको नतिजा हेर्दा, पुरानो जहानिया शासनमा र एकतन्त्रीय ब्यवस्थामा भन्दा फरक अनुभुती नागरिकले गर्न पाएनन्।
ब्यवस्था उत्तम,मान्छे खत्तम हुनुको नतिजा हामी भोगिरहेका छौ।अब एउटा जोड्दार झ,ट्का लगाएर पुरानो पुस्ताका सबैलाई आराम गराउने हो भने यी उपलब्धिको आधारमा मुलुकले सुख नै सुख पाउँछ।९९% काम उहाँहरुले गरिदिनु भएको छ।
अब १% काम बाँकी रह्यो ।त्यो भनेको यो सुन्दर ब्यवस्थामा लागेका फोहरको सफाइ मात्रै हो।अब त सजिलो पनि छ, हिजोका दिनमा जस्तो कठिन संघर्ष नै चाहिदैन। बा ले घर बनाइदिए भन्दैमा बा लाई यो घर जुवामा दाउ लगाउन दिने त?
बा ले पढाए हुर्काए भन्दैमा र,क्सी खाएर भ,कुर्न दिने त? बा बौलाए भने बालाई पाता कसेर भएपनि आराम र उपचार गराउनु पर्छ।बा हुन् नी! हो त्यो “सानो काम” गर्न “ठुलो प्रतिज्ञा” लिन अब ढिला गर्नु हुन्न।
केही “नमुनाहरुलाई” घर बाट निस्कनै नदिने हो भने यो घर नमुना बन्छ। ठुलो संघर्ष बा हरुले गरे, ठुलो उपलब्धि बा हरुले लडेर उपलब्ध गराए तर बा हरु बौलाए। हिजो यो देश बचाउने बा हरु बाट नै अब यो देश बचाउनु पर्ने देखियो।
त्यसलागि एउटा सानो चिटिक्क परेको क्युट खाले क्रि,यटिभ शान्त तर प्रभावकारी बि,द्रोह/आ,न्दोलन/ अभियान/ मुभ्मेन्ट/ह,ल्लाबोल/शंखनाद/ क्रा,न्ति … को टाइम आयो। उज्यालो भयो, उठौ साथी हो!